file manager အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » file manager
file manager APK ကို
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ဖြင့်အလွယ်တကူသင်၏ဖိုင်များကိုလုံလုံခြုံခြုံ, ထိထိရောက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲရန်, နှင့် - Google တွင်အကောင်းဆုံးနဲ့အခမဲ့ app ကို Play!
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ဖြင့်, သင်သူတို့သည်သင်၏ Device ရဲ့မူလတန်းသို့မဟုတ် microSD ကဒ်တွင်သိမ်းထားသောပါတယ်ရှိမရှိအားလုံးသင့်ဖိုင်များစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်စာရွက်စာတမ်းများ, ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, ဂီတဖိုင်များ, အရေးကြီးသော app များနှင့်ပိုပြီးစုစည်းကူညီပေးသည်။ သင်ကပိုမိုလွယ်ကူသူတို့ကိုတွေ့ရှိရန်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
* file manager ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည်:
☆ Professional ကဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က၎င်း၏အလိုလိုသိ interface ကိုအတူလျှောက်လွှာသင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်သို့မဟုတ်တစ် microSD ကဒ်တွင်သိမ်းထားသောကိုမဆိုဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါကိုကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ application ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း, ကူးယူအတိတ်, ရွေ့လျား, ဖျက်ခြင်းအမည်ပြောင်း, အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှု, ဖိုင်ခွဲဝေမှုနှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင် tools များ၏အပြည့်အဝအကွာအဝေး, ပေးထားပါတယ်။ memory card များနှင့် SD ကဒ်။ ဒါဟာအမည်ပြောင်းဖိုင်အဖြစ်ဿုံအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင့်မည်သည့်ဖိုင်ပုံစံဖွင့်နိုင်ပါတယ်နဲ့တူလှပါတယ်။
☆ကို Safe နှင့်ထိရောက်သော: ဖိုင်မှတ်တမ်းမန်နေဂျာ 100% ဒေသခံဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်, ဖိုင်ယိုစိမ့်မရှိစွန့်စားမှုလည်းမရှိ။ သင့်ရဲ့ဖိုင်တွေနဲ့သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံဖြစ်ကြသည်။
☆လွယ်ကူခွဲဝေမှု, သိုလှောင်မှု: အဆင်ပြေ features တွေကိုသုံးပြီးသင်ရွေးချယ်ထားသောသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဖိုင်များ, လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်မိသားစု, အီးမေးလ်သို့မဟုတ် cloud storage tools တွေကိုလျင်မြန်စွာမျှဝေပါ။ ။ app ကို၏ရှယ်ယာ။ အထူးသဖြင့်, သငျသညျတခါမှာမျိုးစုံဖိုင်တွေရွေးနိုင်သည်။
☆ကို Wi-Fi ကို File Transfer: တယောက်က FTP ကနေတစ်ဆင့်ကြိုးမဲ့ files တွေကို access ရန်သင့် PC ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်အလွယ်တကူသင်လုပ်ချင်တဲ့ဖိုင်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
☆အကြိုက်ဆုံး: သင်အသုံးပြုနိုင်အခါတိုင်းတစ်ဦးအပြည့်အဝ-ဖွဲ့စည်း, လွယ်ကူသော-to-ကိုရှာဖွေအံဆွဲသို့သင်အကြိုက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းများယူလာပါ။
☆ဂရိတ်အဆင်ပြေစေရန် - ဖိုင်ရှာဖွေရေး
search engine-optimized ရှာဖွေရေးဖိုင်တွေ 1 ဒုတိယအတွက်ပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှုနဲ့ SD ကဒ်များအတွက်ဖိုင်တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်သုံးစွဲသူများထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ပုံများ, ဂီတ, ဗီဒီယိုများ, apps များအဖြစ်, အမျိုးအစားအားဖြင့်ဖိုင်တွေ browse နိုင်ပါတယ် ...
☆လုံးဝအခမဲ့: ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲအခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် 100% ဖန်တီးပါ။ သင်က app ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမြှုတ်မဆိုအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့အဘို့အ, အသုံးပြုသူရဲ့ကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံနှင့်နျဖိုးထားကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းသည်။
, advanced settings အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးထုတ်ကြိုးစားကြရန်။
ကျနော်တို့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကျနော်တို့အများဆုံးချင်သောအလွန်ကြီးစွာသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါကကျနော်တို့ဒီ app ကိုဖန်တီးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်
ဒါ့အပြင်သင် (Explorer ကို File) ဖိုင်မှတ်တမ်းမန်နေဂျာကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်စတိုးဆိုင် Play ကို Google ပေါ်တွင်သင်၏တုံ့ပြန်ချက်မျှဝေပါ။
media.topapps@gmail.com: သင်, မှတ်ချက်ပေးရန်တုံ့ပြန်ချက်များကိုသို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့လျှောက်လွှာအကြံပြုလိုလျှင်, တစ် Message ပေးပို့ကျေးဇူးပြုပြီး
4.53 ကို MB